Kulan dhexmaray Farmaajo iyo Qoor-Qoor oo natiijo la'aan ku dhamaadey | KEYDMEDIA ONLINE
Kulan dhexmaray Farmaajo iyo Qoor-Qoor oo natiijo la’aan ku dhamaadey
Kulanka ayaa ku qabsoomay Villa Somalia, waxaana codsaday Qoor-Qoor oo Farmaajo ka raadinayay taageero dhanka Ciidanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xog ay Keydmedia Online heshay ayaa sheegaysa in Kulan gaar ah oo Farmaajo iyo Qoor-Qoor ku dhexmaray Villa Somalia 25-kii bishan ayaa kusoo dhamaadey natiijo la'aan.
Fahad Yaasiin ayaa goobjoog ahaa Kulanka oo sida KON ogaatay uu codsaday Qoor-Qoor oo Farmaajo ka raadinayay taageero dowladda siiso Ciidanka dagaalka kula jira Kooxda Al-Shabaab Koonfurta gobolka Mudug.
Farmaajo ayaa u deyriyay Qoor-Qoor, isagoo u sheegay in dowladda aan xiligan wax taageero hub, rasaas iyo gaadiid dagaal siin karin Ciidanka ku sugan Mudug, kuwaasoo tan iyo bishii lasoo dhaafay ku guuleystay inay Al-Shabaab ka saaraan degaannada Bacaadweyne, Camaara, Qaycad iyo kuwa kale.
Go'aanka Farmaajo ayaa saameyn ku yeeshay guulihii laga gaarey dagaalka, iyadoo Ciidanka ay isaga soo baxeen Bacaadweyne iyo Camaara, oo si sahlan Al-Shabaab dib ula wareegtay.
Qoor-Qoor ayaa markii uu Villa Somalia kala soo kulmay waji-gabax ku wargeliyay taliyeyaasha Ciidanka ka dagaalamaya Mudug inaysan dhanka dowladda ku tashan, oo aan ka sugin wax taageero ah, hadii ay ahaan lahayn askar xoojin ah iyo saanad militeri.
Dad badan ayaa aad uga xumaadey tallaabada Farmaajo oo dhabar-jab ku ah dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo dhawaan horumaro ay Ciidanka ka sameeyeen gobolka Mudug.
Al-Shabaab ayaa hadda maalintii 3aad maamuleysa Bacaadweyne iyo Camaara, iyadoo Ciidankii kasoo baxay ay usoo jiheysteen dhanka Gaalkacyo iyo Qaycad oo laga baqayo inay faarujiyaan.
Lama oga sababta Farmaajo uu ku diiday dalabka Qoor-Qoor, laakiin wuxuu imaanayaa xili xiriirka labada dhinac uu aad u hooseeyo, taasoo ku saleysan doorashadda socota oo Villa Somalia boob ku haysa kuraasta Baarlamaanka.
Farmaajo ayaa culeys badan saarey Gedo, oo uu kasoo jeedo halkaasii Ciidanka ugu badan ee Gogor uu u daabulay, iyagoo ka saarey gobolka Malleeshiyaadkii Axmed Madoobe.